【Christmas Event र Light Up】
जापानमा, हेलोवीन सकिएसँगै शहरहरुमा क्रिसमसको माहोल बनेको छ।
<तपाईंहरु क्रिसमसमा के गर्नुहुन्छ? >
तपाईंहरु क्रिसमस मनाउनुहुन्छ कि हुँदैन? आजकल, क्रिश्चियन धर्मसँग सम्बन्धित नभएका घरपरिवारमा पनि क्रिसमस मनाउने चलन छ। चाडपर्व एउटा उत्साह हो जसलाई धर्म भन्दा पनि संस्कार, संस्कृती, सौहार्दता अनि नितान्त खुशीको अभिब्यक्तिका रुपमा लिन जरुरी छ जस्तो लाग्छ।
क्रिसमसका अवसरमा नेपालमा खास गरि, काठमाडौंको ठमेल, दरबारमार्गका साथै ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा र उपत्यका बाहिरका ठूला पर्यटकीय शहरहरुमा क्रिसमस ईभ कार्यक्रम आयोजना गर्ने र विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम गरी पर्व मनाउने चलन छ। प्रायःजसो साथीहरुसँग बाहिर घुम्ने र खानपिन गर्ने अवसरको रुपमा क्रिसमस मनाउने गरेको देखिन्छ। क्रिसमसको ठूलो आकर्षण भनेको सान्टा क्लस हुन्, उनले सबैलाई उपहार दिने र खुशी बाँड्नेछन् भन्ने विश्वास छ । आजकल धेरैजसो शिशुस्याहार र विद्यालयहरुमा क्रिसमसको अवसरमा सान्टा क्लसको भेषमा केटाकेटीहरुलाई उपहार दिई रमाइलो गर्छन्। प्रायःजसो देशहरुमा क्रिसमसको समयमा, फ्राइड कुखुराको मासु र रोष्ट गरिएका कुखुराको मासु खाने परम्परा छ। सबैतिर झिलिमिली बत्तीमा सजिएका क्रिसमस ट्री र सान्टा क्लसको राता लुगाको पहिरनमा अधिकांशले 'हेप्पी क्रिसमस डे' भन्दै शुभकामना साटासाट गरेको देख्न पाईन्छ।
तेन्जिन र हाकाता शहरहरूमा, व्यावसायिक पसलहरु तथा निजी घरहरुको छाना आदि, ठूलासाना विभिन्न बत्तीहरूले सजाइएको हुन्छ।
एउटै ठाउँमा पनि, गत वर्षको भन्दा फरक तरिकाले सजाएको हुन सक्ने भएकोले, विभिन्न झिलिमिलीहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
＜फुकुओका शहर नजिकको Illumination स्थलहरूको बारे＞
विदेशीहरूलाई "उपयोगी" जानकारी प्रदान गर्ने Fukuoka Now मा, फुकुओका शहर नजिकको Illumination स्थलहरूको सूचीबद्ध विशेष लेख छ ।
फोटो सहित बुझ्न सजिलो हुने गरि तयार गरिएको यो लेख एकपटक हेरेर, आफ्नो परिवार, साथीभाई वा प्रेमीसँग घुमघाम गर्दा कसो होला?
फुकुओका क्रिसमस मार्केट, हरेक वर्ष नोभेम्बरदेखि डिसेम्बरको क्रिसमसको दिनसम्म, हाकाता र तेन्जिनमा एकै साथ आयोजना हुँदै आईरहनु, फुकुओका शहरको हिउँदको एक किसिमको परम्परा हो।
जापानको सबैभन्दा ठूलो क्रिसमस मार्केटमा, खुला परिसरमा धेरै स्टलहरू पंक्तिबद्ध राखिएका हुन्छन्, जहाँ क्रिसमसको झिलिमिली बत्ती वा सजावटका साथसाथै, तातो वाइन, तातो चकलेट आदि जस्ता तातो पेय र स्वादिष्ट खानाको मजा लिने महोत्सव हो।
यस वर्ष, “Hakata Ekimae Hiroba” र तेन्जिनको “Fukuoka Shiyakushomae Fureai Hiroba” मा क्रिसमस मार्केट आयोजना गरिनेछI
यसका साथै गत वर्षदेखि नाकासु क्षेत्रलाई ‘नाकासु किबोउ नो हिकारी’ भनेर, बेलुकी ५ बजेदेखि मध्यरात १२ बजेसम्म सडक छेउका रुखहरूमा बत्ति बालि झिलिमिलीको स्थल बनाईएको छ।
तपाईंहरु पनि अवश्य यस झिलिमिलीको आनन्द लिनुहोला।
जीवनयापन गर्न आरामदायक यस शरद ऋतुमा, शहरमा मात्र नभई प्रकृतिलाई छुने पर्यटकीय स्थलहरुको पनि आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। फुकुओकाको प्रत्येक क्षेत्रहरुमा शरद ऋतुका फूलहरू र कोसमसहरू फुलिरहेका छन्।
कोसमस फूल, गुलाबी र सेतो रंग बाहेक गाढा रातो, पहेंलो र सुन्तला रङहरूका साथ हरेक बर्ष रङ्गीन बन्दै गईरहेको छ। यदि घमाइलो र राम्रो हावायुक्त ठाउँ भएमा, कम माटोमा पनि यो फूल फूल्ने गरेको देखिन्छ।
फुकुओका शहरबाट पुग्न सकिने कोसमस फूलका लागि केहि प्रसिद्ध स्थलहरु भन्न गईरहेकीछु।
ट्रेनबाट सजिलै जान सकिने, समुद्री हावाको आनन्द महसुस गर्न सकिने लोकप्रिय घुमघामको स्थल हो, Umino-nakamichi-kaihin-kohen । यस समय ट्युलिप, नेमोफिला, गुलाफ र तोरीको फूल आदि विभिन्न फूलहरू विशाल क्षेत्रमा फुलिरहेका छन्।
अर्को स्थल छ, Fukuoka City Meino-hama बाट ferry मार्फत लगभग १० मिनेटमा पुग्न सकिने रिसोर्ट जस्तो टापु, Nokono-shima । Nokono-shima-island-park मा चेरी, तोरीको फूल र कोसमस आदि मौसमी फूलहरुको साथसाथै समुद्रको आनन्द एकै साथ लिन सकिने रमणीय स्थलको रूपमा चिनिन्छ।
तपाईंहरु पनि बिदाको दिन आफ्नो परिवार तथा साथीहरुसँग यी पार्कहरुमा घुमघाम गर्न जानुहोला।
बस्न पाउने अवधि, बसेको मितिबाट २ बर्ष हो।
यस पटकको आवेदनमा, एक्लै बस्न पनि सम्भव छ।
【प्रसाशनिक वकिलद्वारा परामर्श सम्बन्धि】
सोमबारदेखि शुक्रबार ८:४५ देखि १८:०० सम्म कल स्वीकार गरिन्छ I
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य（医療・保健） , प्राकृतिक प्रकोप（災害）
【ओओजुमोउ क्युउश्यु बास्यो】
के तपाईंले कहिल्यै सुमो रेसलिंग लाइभ हेर्नुभएको छ?
नोभेम्बर १४ देखि २८ सम्म, फुकुओका ईन्टरनेसनल सेन्टरमा ओओजुमोउ क्युउश्यु बास्यो आयोजना हुन गईरहेको छ।
हरेक वर्ष नोभेम्बरमा, फुकुओका शहरमा युकाटा लगाएका सुमो रेस्लरहरू देख्न पाईन्छ, तर पछिल्ला दुई वर्ष नयाँ कोरोनाभाइरसको प्रभावका कारण, खेल रद्द गरिएको थियो।
शहर वरिपरि हिड्ने सुमो रेस्लरहरू भर्खरका भए पनि, भविष्यमा प्रसिद्ध हुनेहरुको गन्तिमा धेरै पर्छन्।
समाचार र पत्रपत्रिकामा नाम छापिएका सुमो रेस्लरहरू लोकप्रिय हुनेभएकाले उनीहरू सार्वजनिक रूपमा बाहिर देखा पर्दैनन्।
प्रवेश शुल्कको हकमा, यदि बिहानदेखि लाइनमा बस्नु भयो भने सबैभन्दा सस्तो बुकिंग नभएको सिट प्रति व्यक्ति २००० येनमा पाउन सक्नुहुन्छ।
तामारी भनिने सबैभन्दा राम्रो सिटको शुल्क प्रति व्यक्ति २०,००० येन पर्छ।
भनिन्छ कि, एक पटक तामारीमा बसेर खेल हेर्ने सुमो फ्यानहरुको सपना हुन्छ रे।
करिब दुई वर्षको अन्तरालमा हुन गईरहेको क्युउश्यु बास्यो, निकै रोमाञ्चक होला जस्तो छ नि है।
【Autumn National Fire Prevention Campaign】
नोभेम्बर ९ देखि नोभेम्बर १५ सम्म “Autumn National Fire Prevention Campaign”को अवधि होI
गत वर्ष, फुकुओका शहरमा २६१ वटा आगलागिको घटनाहरु घटेका थिए।
दाहरणको रूपमा, धुने लुगा र पर्दा, स्टोभमा छोएर आगलागी भएको घटना छI
स्टोभको स्विच अफ गर्न नबिर्सन सावधान हुनुहोस्I
【iina iiha दिवस अर्थात् राम्रो दाँत दिवस】
नोभेम्बर ७ र ८ “iina iiha दिवस अर्थात् राम्रो दाँत दिवस” हो।
राम्ररी चपाएर, मिठो खाएर, सधैं स्वस्थ भई बाँच्नको लागि दैनिक रुपमा आफ्नो दाँतको ख्याल राख्नु आवश्यक छ।
मुख स्वस्थ राख्नको लागी, दैनिक रुपमा दाँत माझि मुख सफा राख्नु जरुरी छ। दाँत ब्रश गर्नुको बाहेक, नियमित रुपमा दाँतको परिक्षण गर्दा, दाँतमा किरा लाग्ने तथा गिजा सम्बन्धि रोगको पनि जाँच गराउने गरौं।
फुकुओका शहरमा, उत्कृष्ट दन्त चिकित्सा परिक्षणहरु उपलब्ध छन्।
अप्रिल १ देखि अर्को बर्षको मार्च ३१ सम्म ३५, ४०, ५०, ६० बर्षमा लाग्ने फुकुओका बासिन्दाहरुले ७०० येनमा र ७० बर्षमा लाग्ने फुकुओका बासिन्दाहरुले नि: शुल्क दाँत र गिजाको परिक्षण गराउन सक्नुहुन्छ।
यस अतिरिक्त, गर्भावस्थाको समयमा एक पटक र बच्चा जन्मे पछि एक वर्षभित्रमा एक पटक नि: शुल्क दन्त परिक्षण गराउन सक्नुहुन्छ।
दाँतको जाँच गर्दा, दाँत माझ्ने तरिका र ब्रशले नछोएको तिर जाँच्न लगाई, ब्रशले नछुने भागहरु प्रति ध्यान दिई दाँत माझ्ने गरौं।
यसै मौकामा, आफ्नो खानपान र मुखको हेरचाहलाई यसो विचार गरि, स्वस्थ दाँत र मुखको बारेमा सोच्ने होइन त?
नोभेम्बर ६ अपार्टमेन्टको वार्षिकोत्सव हो। यसको कारण, सन् १९१० मा, यस दिन, टोकियोको उएनोमा जापानको पहिलो काठको अपार्टमेन्ट पूरा भएको थियो।
त्यस अपार्टमेन्टको नाम "उएनो क्लब" राखिएको थियो। पश्चिमी शैलीमा बनेको ५ तलाको यस रेंटल अपार्टमेन्टमा ७० वटा कोठाहरु थिए। उएनो पार्कको नजिकै बनेको यस अपार्टमेन्टमा, वाशरूम, बाथरुम, र टेलिफोन सेवा साझा थियो र बाहालमा बस्ने व्यक्तिले नुहाउँदा खेरि लागेको वास्तविक शुल्क तिर्थे।
वास्तवमा यस अपार्टमेन्टमा बस्ने मानिसहरुको पेशा मुख्यतयाः, निजामती कर्मचारी, कार्यालय कर्मचारी र शिक्षक भई, सबै विवाहित थिए। त्यहाँ जापानीहरु मात्र नभई रूसी र फ्रान्सेली विदेशीहरु पनि बस्ने गरेको देखिन्छ।
काठको अपार्टमेन्ट भएकोले उचित भाडामा बस्न त सकिन्छ, तर हल्ला चाहिं धेरै हुन्छ।
ढोका खोल्दाबन्द गर्दा र कोठाभित्र वरपर हिड्दा आउने आवाज, त्यस्तै, कुराकानी गर्दाको आवाजप्रति ध्यान दिऔं। आफू बाहेक अरू मानिसहरु पनि त्यहाँ बस्छन् भन्ने कुरा मनन गरि बसौं।
जापानमा otagai-sama भन्ने शब्द छ। यसको अर्थ, अर्को व्यक्ति र तपाईं एकै परिस्थितिमा हुनुहुन्छ । यदि तपाईं छिमेकिको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईं पनि आफ्नो आवाज छिमेकिलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ । कृपया शिष्टाचारको पालना गरि जापानमा आफ्नो जीवनयापनको आनन्द लिनुहोस्।
अंग्रेजी, चाइनिज, कोरियाली, नेपाली आदि ७ वटा विदेशी भाषाहरूमा यो सेवा उपलब्ध छ।
【नयाँ कोरोना भाइरस र इन्फ्लुएन्जा रोकथाम】
प्रत्येक वर्ष जाडो शुरु भयो कि, इन्फ्लूएन्जाको संक्रमण देखा पर्दछ।
नयाँ कोरोना भाइरससँगै दुवै रोगहरू एकै समयमा हुने सम्भावना हुन सक्छ।
यसकारण, अहिले, नयाँ कोरोना भाइरसको रोकथामबारे सावधान सबैजनाले, हात धुने र मास्क लगाउने, कुनै व्यक्तिको सम्पर्कमा आउँदा पर्याप्त दूरी बनाएर बस्ने जस्ता अभ्यासहरु, इन्फ्लूएन्जा हुनबाट बच्नको लागि पनि जारी राख्ने गर्नुहोस्I
यदि इन्फ्लूएन्जा लागि हालेमा, गम्भीर बिरामी हुनबाट बच्नका लागि पनि, इन्फ्लूएन्जाको खोप लगाउन सल्लाह दिन्छौंI
साथै, नयाँ कोरोना भाइरस र इन्फ्लूएन्जा दुबैको खोप लिने अवस्थामा, १३ दिन वा सो भन्दा बढी दिनको अन्तरालमा लगाउनुहोलाI